जन्ती लिएर दुलहा विवाहमा नपुगेपछी, दुलहीले घरमै पुगेर दिइन् धर्ना । —
जन्ती लिएर दुलहा विवाहमा नपुगेपछी, दुलहीले घरमै पुगेर दिइन् धर्ना ।
७ मंसिर २०७८, मंगलवार १२:५५ admin
एजेन्सी। भारतको बरमपुरमा दुलही आफ्नी आमासँग दुलहाको घरमा धर्ना दिन पुगिन् । दुलहीले विवाहको दिन दुलहा जन्ती लिएर उनको घर नपुगेको आरोप लगाएकी छिन् । यसैकारण आफू सिधै दुलहाको घरमा जानु परेको उनले बताएकी छिन् ।
भारतीय सञ्चार माध्यम आजतकमा प्रकाशित समाचार अनुसार यी दुईले केही दिन अघि अदालती विवाह गरेका थिए र दुबैको परिवारले विशेष व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा पारम्परिक हिन्दु रिति–रिवाजमा पुनः विवाह गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
दुलहीका अनुसार उनको परिवारले जन्तीको घण्टौं प्रतिक्षा गरे । साथै दुलहीले थुप्रै पटक दुलहीलाई फोन र मेसेज पनि पठाइन् । उनका अनुसार दुलहाले न त फोन उठाए न मेसेजको जवाफ दिए, न नै उनको घरमा जन्ती आयो । त्यसपछि उनी आफ्नी आमासँग सिधै केटाको घरमा पुगिन् र धर्ना दिन थालिन् ।
सूचना पाएपछि प्रहरी दुलहाको घरमा पुगे र दुलहीलाई सम्झाउने प्रयास गरे । तर यी दुई प्रहरीमाथि नै खनिए र दुलहाको परिवारबाट घुस लिएको आरोप पनि लगाए ।
यो मामिलामा बहरमपुरका एसपी पिनाक मिश्राका अनुसार महिलाले उनको विवाह सुुमित नामका युवकसँग भएको बताएकी छिन् । महिलाले पहिला पनि कुनै मामिलामा प्रहरीसमक्ष उजुरी दर्ता गरिसकेकी छिन् ।
युवतीले युवकविरुद्ध उनको परिवारविरुद्ध पुनः उजुरी दर्ता गरेकी छिन् । यसबारे अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ । प्रहरीका अनुसार अदालतको निर्देशनको आधारमा कारवाही गरिनेछ ।
दुलहीका अनुसार उनले र सुमितले ७ सेप्टेम्बर सन् २०२० मा अदालतमा विवाह गरेका थिए । उनका घरका सदस्यले उनलाई पहिलो दिनदेखि नै प्रताडित गरिरहेका थिए । सुरुमा उनका श्रीमानले उनलाई साथ दिएको तर पछि उनी आफ्नो परिवारको लहलहैमा लाग्न थालेको उनले आरोप लगाइन् ।
उनले भनिन्, ‘मलाई थुप्रै पटक तनाव दिइयो र कोठामा बन्द गरियो । त्यसपछि मैले प्रहरीमा उजुरी दिएँ । तर पछि दुई परिवारबीच सम्झौता भयो । २२ नोभेम्बरमा विवाहको मिति निश्चित भएको थियो । तर उनीहरु जन्ती लिएर आएनन् त्यसैले म आफ्नी आमासहित यहाँ आउनुपरेको हो । ’
इन्स्टाग्राम बाट प्रियंकाले किन हटाइन श्रीमानको थर?
नागाको पहिलो रोजाईमा थिइनन् समान्था ! समान्थालाई ल्याउनु अघि नागा थिए यि अभिनेत्रीको प्रेममा
२२ मंसिर २०७८, बुधबार ०८:५४ admin 0
एजेन्सी – अस्ट्रेलियाले पनि सन् २०२२ मा हुने बेइजिङ ओलम्पिक्सलाई कूटनीतिक रुपमा बहिस्कार गर्ने भएको छ...
२१ मंसिर २०७८, मंगलवार ०९:१७ admin 0
काठमाडौँ– अमेरिकाले उत्पादन हुने खानेकुराको एक तिहाई खानेकुरा फाल्ने गरेको छ । अमेरिकाको वातावरण स‌ंरक्षण सम्बन्धी...
२१ मंसिर २०७८, मंगलवार ०६:५४ admin 0
अष्ट्रेलिया संसारकै सबैभन्दा बढी मदिराले ‘मात्ने’ मुलुक हो ?
काठमाडौं । अष्ट्रेलियनहरुले विश्वमै सबैभन्दा भारी मात्रामा मदिरा पिउने गरेको एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणले देखाएको छ...